Gịnị bụ igwe na-ekpo ọkụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
N'oge ọkọchị, ọnọdụ okpomọkụ n'ọtụtụ mba ụwa dị oke elu. Nke a bụ ihe anyị niile chere, mana oge ụfọdụ ọkụ ahụ nwere ike ịkarị oke ma dikwa ọtụtụ ụbọchị, izu na ọnwa.
Ihe omuma a mara dika ife oku, ma nwee ike inwe oke nsonaazụ maka ahụike na ndụ.
1 Gịnị bụ igwe na-ekpo ọkụ?
2 Mgbe ọ pụtara?
3 Kedu ihe ga-esi na ebili mmiri pụta?
3.1 Ohia oku
3.4 Oriri ike
4 Mmiri ikuku kachasị mkpa
4.1 Chile, afọ 2017
4.2 India, afọ 2015
5 Ndụmọdụ iji nagide yana o kwere mee
Okpomoku oku bu Ihe omume nke oke onodu ojoo na-adigide ruo otutu ubochi ma obu izu uka nke na emetuta kwa akuku nke ala ala nke otu obodo.. Manybọchị ole ma ọ bụ izu ole? Eziokwu bu na odighi nkowa nke di “official”, ya mere o siri ike ikwuputa ole.
Na Spain a na-ekwu na ọ bụ ebili ọkụ mgbe edere oke okpomọkụ dị elu (na-ewere oge 1971-2000 dị ka ntụnye aka) na opekata mpe 10% nke ọdụ ihu igwe maka opekata mpe ụbọchị atọ. Mana n'ezie ọnụ ụzọ a nwere ike ịdịgasị iche dabere na mba ahụ, dịka ọmụmaatụ:
Na Netherlands A na-ahụta ya oke ọkụ mgbe edere okpomọkụ karịa 5ºC maka opekata mpe ụbọchị 25 na De Bilt, nke bụ mpaghara nke dị na mpaghara Utrecht (Holland).
Na United States: ọ bụrụ na edere okpomọkụ karịa 32,2ºC maka ụbọchị 3 ma ọ bụ karịa.
Imirikiti oge eme na oge canicular, nke na-emekarị n'oge ọkọchị. Na Ọrịa Canicula Ọ bụ oge kacha ekpo ọkụ n’afọ, ọ ga-ewe n’etiti Julaị 15 na Ọgọst 15. Gịnị kpatara eji ekwu na ha bụ ụbọchị kacha ekpo ọkụ?
Anyị na-echekarị ụbọchị mbụ nke oge ọkọchị (June 21 na Northern Hemisphere na December 21 na Southern Hemisphere) bụ ụbọchị kachasị ekpo ọkụ, mana ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị. Planetwa, dị ka anyị si mara, na-agbagharị n'onwe ya, mana ọ na-agbatịkwa ntakịrị. Ofbọchị nke Oge Ezumike, ụzarị anyanwụ na-abịakwute anyị karị, ma ebe ọ bụ na mmiri na ụwa malitere ịmalite ịcha ọkụ, ọnọdụ okpomọkụ na-anọgide na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-erughị ala.
N'agbanyeghị, ka Ka oge ọkọchị na-aga n'ihu na mmiri oke osimiri, nke mere ka ikuku dị jụụ ugbu a, ala ghaa okpomoku iji malite oge dị ezigbo ọkụ, bụ́ nke nwere ike isikwu ike n’ógbè anyị bi na ya. Dịka ọmụmaatụ, na imaatu, na ụdị ugwu dị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian n'oge a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ oke ọkụ nwere ike ime.
Kedu ihe ga-esi na ebili mmiri pụta?
Ọ bụ ezie na ha bụ ihe ndị sitere n'okike ma anyị enweghị nhọrọ ọ bụla mana ịnwa ịmegharị ka anyị nwere ike, ma ọ bụrụ na anyị emeghị ihe ndị dị mkpa anyị nwere ike ịta ahụhụ nsonaazụ ha, nke na-adịghị ole na ole.
Mgbe enwere oke okpomọkụ n'oge ụkọ mmiri, oke ohia nọ n'oké ihe egwu nke ọkụ. Na 2003, Na Portugal naanị, ọkụ bibiri ihe karịrị ọhịa 3.010 km2.
Childrenmụaka, ndị agadi na ndị na-arịa ọrịa bụ ndị kachasị nwee ike ịnwe ebili mmiri. N'ịga n'ihu n'ihe atụ nke otu na 2003, ihe karịrị ọnwụ 1000 mere n’ime otu izu, na ihe karịrị 10.000 na France.
Mgbe ọ dị ezigbo ọkụ, ọnọdụ anyị nwere ike gbanwee nke ukwuu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ naghị ama anyị. Ma mgbe ọ dị oke ọkụ, ọ bụrụ na anaghị ewere usoro kwesịrị ekwesị anyị nwere ike ịrịa ọrịa strok ma ọ bụ hyperthermia. Karịsịa nke ọdụdụ na okenye, yana ndị ọrịa na ndị buru oke ibu, bụ ndị bi na nnukwu nsogbu.
N'ime oge kachasị ọkụ anyị na-eri ọkụ eletrik, ọ bụghị n'efu, anyị kwesịrị ịjụ oyi ma maka nke a anyị na-agbanye ndị fan na / ma ọ bụ gbanye ntụ oyi. Mana nke a nwere ike ịbụ nsogbu, dịka ịba ụba oriri nwere ike iduga ike ike.
Mmiri ikuku kachasị mkpa
Okpomọkụ na-ekpo ọkụ na Europe, 2003
Chile, afọ 2017
N’agbata Jenụwarị 25 ruo 27, Chile nwetara otu n’ime oke okpomoku kachasị njọ n’akụkọ ihe mere eme. N'obodo Quillón na Cauquenes, ụkpụrụ dị nso na 45ºC, ịdenye 44,9ºC na 44,5ºC n'otu n'otu.
India, afọ 2015
N’ọnwa Mee, n’oge mmalite ọkọchị n’India, ọnọdụ okpomọkụ dị njọ karịa 47ºC, nke butere ọnwụ nke ihe karịrị mmadụ 2.100 ruo 31 nke ọnwa.
Okpomoku 2003 bu ihe kachasi mkpa nye ndi Europe. Edere oke okpomọkụ dị na ndịda Europe, yana ụkpụrụ dịka 47,8ºC na Denia (Alicante, Spain), ma ọ bụ 39,8ºC na Paris (France).
Agabigawo Ndị mmadụ 14.802 n'etiti August 1 na 15.
N'ime izu ikpeazụ nke ọnwa Juun na nke mbụ nke Julaị, na Spen, ọkachasị na mpaghara Mediterenian, ọnọdụ okpomọkụ dị elu, dịka ndị ahụ na Murcia (47,2ºC), Alicante (41,4ºC), na Huelva (41,4ºC), ma ọ bụ na Palma (Mallorca) 39,4ºC.
Ndụmọdụ iji nagide yana o kwere mee
Mgbe enwere ikuku ọkụ, ị ga-eme ihe ọ bụla iji merie ya. Ndị a bụ aro ole na ole nwere ike inyere gị aka:
Na-hydrated: Echerela ruo mgbe akpịrị na-akpọ gị nkụ ị drinkụ mmiri. Na oke okpomọkụ, mmiri na-efu ngwa ngwa, ya mere ọ dị mkpa na ahụ nwere mmiri na-aga n'ihu.
Rie nri ohuru: Dịka ihe oriri na-ekpo ọkụ na-amasị gị, n'oge ọkọchị na, karịa ihe niile, n'oge oge okpomọkụ, zere iri ya.
Tinye na anwụ na-achaMa ị gara n’osimiri ma ọ bụ ịgagharị, akpụkpọ anụ mmadụ na-adị nhịahụ ma dịkwa mfe na-enwu n’anwụ.
Zere ịpụ n'etiti ụbọchị: n'oge a ụzarị ọkụ na-abịa nke ukwuu, n'ihi ya, ha nwere mmetụta ka ukwuu na ala ma, kwa, na ahụ.
Chebe onwe gị site na anyanwụYiri uwe na-acha ọkụ (ụcha ọkụ na-egosipụta ìhè anyanwụ), yiri ugogbe anya anwụ, ma nọrọ na ndò iji zere nsogbu.
Okpomọkụ na-ekpo ọkụ bụ ihe ịtụnanya nke nwere ike ịpụta kwa afọ. Ọ dị mkpa ịnwe nchedo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Gịnị bụ igwe na-ekpo ọkụ?
Mmiri mmiri, otu n'ime oke ifufe kachasị mma enwere
Ala ọmajiji ọ kwara 6,4 na agwaetiti Greek nke Kos